उपत्यकामा संक्रमितले भरिँदै अस्पताल, आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिनेलाई छैन ठाउँ! :: विवेक राई :: Setopati
उपत्यकामा संक्रमितले भरिँदै अस्पताल, आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिनेलाई छैन ठाउँ!
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तोकेको उपत्यकाका अधिकांश अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन्। बेड अभाव हुँदा अहिले नयाँ संक्रमितलाई भर्ना गर्न अस्पताललाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ।
धेरै अस्पतालले मध्यम लक्षण भएका केही संक्रमितका लागि ठाउँ भए पनि जटिल अवस्थाका संक्रमितका लागि आइसियू अभाव रहेको बताएका छन्।
पाटन अस्पतालमा मात्र कोभिडका लागि छुट्याइएको २१ वटा आइसियूमा १६ जना उपचाररत छन्। जसमा १४ जना भेन्टिलेटरमा रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले जानकारी दिए।
अब भने थप बिरामीलाई भर्ना गर्न मुस्किल पर्ने बताउँदै निर्देशक शाक्यले भने, 'सामान्य अक्सिजन चाहिने संक्रमितलाई भर्ना गर्न सकिएला तर सिकिस्त बिरामी आए भर्ना गर्न मुस्किल पर्छ।'
पाटनले कोभिड संक्रमितका लागि भनेर २ सय १० बेड छुट्याएको छ। जसमा १ सय ३८ जना संक्रमित उपचाररत छन्। यहीँ गतिमा संक्रमितको चाप बढे एक सातामै बेड भरिने भन्दै निर्देशक शाक्यले अहिलेदेखि नै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न गाह्रो भएको बताए।
उनले थप आइसियू विस्तार गर्न नसकिने भन्दै २५ वटासम्म पुर्‍याउन सकिने जनाए।
यस्तै, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा पनि कोभिडका लागि छुट्याइएका बेड भरिएका छन्। संक्रमितका लागि १ सय ४० बेड छुट्याइएकोमा हिजो १ सय ६ जना संक्रमित उपचाररत छन्।
थप संक्रमितहरू भर्ना गर्न समस्या भएपछि अस्पतालले आइतबार नै बेड क्षमतालाई बढाएर १ सय ४० पुर्‍याएको थियो। अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रविण नेपालले भने, 'हिजोसम्म १ सय १० बेड थियो। आज बढाएर १ सय ४० पुर्‍याउने भनिएको छ तर त्यो पनि आजै भरिन्छ होला।'
उनले अस्पतालमा आइसियू समेत अभाव रहेको जनाए। जम्मा २० वटा आइसियू रहेकोमा अहिले १८ जनाको उपचार भइरहेको छ। भेन्टिलेटर भने सबै भरिएको छ। डा. नेपालले ८ वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा ८ जना नै उपचाररत रहेको जनाए।
अब थप आइसियू र भेन्टिलेटर विस्तार गर्ने नसकिने भन्दै उनले भने, 'तुरून्तै आइसियू बढाउने, भेन्टिलेटर बढाउने भन्ने सकिँदैन। भएकैलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने हो।'
उनले अहिले आइसियूमा राम्रो भएकालाई वार्डमा सरिएको र वार्डमा गाह्रो भएकालाई खाली अवस्था हेरेर आइसियूमा सारिएको बताए।
यस्तै, १ सय २० बेड रहेको टिचिङ अस्पतालमा ७० जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जसमा ११ जना आइसियू र ४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। टिचिङमा पनि हाललाई कोभिडका लागि भनेर १२ वटामात्र आइसियू बेड छन्। अस्पतालले थप पाँच वटा आइसियू विस्तार गर्ने तयारी गरेको निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले जानकारी दिए।
उनले बेड अभाव हुन थालेपछि थप २२ वटा बेड कोभिडका लागि तयार पार्न लागिएको बताए।
'अहिले जम्मा १ सय २० बेड छन्। त्यसमा २२ बेड थप्न खोजेका थियौं तर जनशक्ति नभएर आजदेखि सुरू गर्छौं।'
पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ प्रकार तीव्र फैलिएसँगै अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितहरू ह्वात्तै बढेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पनि कोभिड उपचारका लागि तोकिएका उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालमा बिरामीको चाप छ।
मन्त्रालयले तीन वटा निजीसहित १३ वटा अस्पताल कोभिड उपचार गर्ने अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ र सूचीकृत सबै अस्पतालमा संक्रमित भरिएका छन्।
साथै, अस्पतालमा जटिल अवस्थाका संक्रमित संख्या पनि बढेको छ।
मन्त्रालयले आइतबार प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार यी १३ वटा अस्पतालमा ८२ जनाको आइसियू र ४० जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये धेरै अस्पतालले थप जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने जनाएका छन्।
तोकिएकामध्ये धेरै बेड क्षमता रहेका पाटन, टिचिङ र वीर अस्पतालमै संक्रमितको चाप बढेको छ। तीनै अस्पतालले थप जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई राख्न ससम्या हुने बताएका छन्।
उनीहरूले सामान्य अक्सिजन चाहिने बिरामीका लागि ठाउँ भए पनि आइसियू चाहिने जटिल अवस्थाका संक्रमितका लागि भने बेड अभाव रहेको जनाएका छन्।
मन्त्रालयले भने कोभिडका लागि उपत्यकाका अस्पतालहरूले कति वटा आइसियू र भेन्टिलेटर छुट्याएका छन् भन्ने तथ्यांक राखेको छैन। जसअनुसार तथ्यांकमा कति संक्रमित आइसियू र भेन्टिलेटरमा छन् भन्ने छ तर ती अस्पतालमा अब कति आइसियू र भेन्टिलेटर खाली छ भन्ने चाहिँ छैन।
मन्त्रालयले उपत्यकामा कोभिड संक्रमितका लागि झन्डै ६ सय आइसियू र २ सय ६५ वटा भेन्टिलेटर रहेको जनाएको छ। जसमा १ सय २७ जना आइसियू र ४४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १३, २०७८, ०३:३५:००